Tetikasa maro amin’ny fampandrosoana ifotony, famoronana asa, famoronana toekarena salantsalany ho an’ny tanora amin’ny resaka fitsaboana, fampianarana… izy io. Fahatarana nandritra ny 59 taona no ambara fa hotratrarina ao anatin`ny 5 taona. Natao izay hampilendalenda ny rehetra amin’izay fe-potoana izay. Tena ho vita sy mifanentana ary ahafahana mampandroso an’i Madagasikara tokoa ve ?
Niainga avy aiza ?
Ny 26 janoary 2018 no nandrenesana azy voalohany tany Parisy Frantsa, ary nanomboka niseho teo ireo olona akaiky ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina, tahaka an-dry David Douillet, Frantsay efa voapaingotry ny HATVP (Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique) tany Frantsa noho ny raharaha kolikoly sy afera maloto, araka ny nambaran’ny Gazety Le Parisien. Tsy mijery ny zava-misy marina eto Madagasikara ary tsy mahalala ny tena olan`ny vahoaka Malagasy, raha tarafina tamin’izay endriny ivelany niaingany izay fa noketrehiny tany ampitan-dranomasina niaraka tamin’ireo vahiny mety ho tao an-damosin’i Andry Rajoelina tamin’ny fifidianana. Ny tenany rahateo toa nalailaifonosana tamin’ny fitakosenana tamin’ny Malagasy rehefa niala teo amin’ny fitondrana.
Mamaly ny filan’ny Malagasy ve ? Manodidina ny 80%-n`ny mponina eto Madagasikara dia tantsaha avokoa. Tokony ho niompana kokoa tany amin`ny fambolena sy fiompiana izany io. Hamaly ny filan`ny tantsaha rehetra ve anefa ny IEM ? Ekena fa miroso amin`ny fivoarana ara-teknolojia isika ary Madagasikara dia manana olona tena mahafehy io tontolo iray io saingy vitsy an`isa noho ny tantsaha. Ireo olona namolavola ny IEM ve tena nanao fidianana ifotony tany amin’ireo Malagasy maro an’isa nialoha ny namolavolana azy, indrindra fa ireo faritra mitoka-monina. Manana olana goavana amin`ny fotodrafitrasa sy lalana ny mpamokatra (production agricole) sy ny tontolon’ny fizahantany.
Fantatra sy takatry ny sarambabem-bahoaka ve ?
Hanarina ny firenena ao anatin`ny dimy taona. Ho tratra ao anatin`ny dimy taona ve izany ? Marina fa resahina ilay hafainganam-pandeha saingy toa tsy mijery ny zava-misy marina, tsy mahalala ny tena olan`ny vahoaka Malagasy satria misy mason-tsivana marobe jerena io fa tsy entina kitaitaitra sy nofinofisina. Mba mahatakatra sy mahalala ilay atao hoe: “IEM”akory ve ny sarambabem-bahoaka ?
Avy aiza ny famatsiam-bola ?
Programa mafilotra fa mila tetibola ana lavitrisa dolara ny IEM. Manana izany ve ny fanjakana Malagasy ? Raha nisy adihevitra nifanaovan’ny kandida roa tonta tamin’ny 16 desambra 2018, dia tsy nanan-kavaly firy momba ny loharanom-bola tamin’ny fitondrana tetezamita sy ny amin’izao i Andry Rajoelina. Ny azo hitarafana ny resaka loharanom-bola aloha, dia ny nilazany ny 3 desambra 2018 teny Antsonjombe fa “mivarotra tany 100Ha”, ohatra dia hahavitana zavatra goavana. Ny vola miditra ve tena mavaha olana an`izay olana misy ? Fetsy ny ekipan`ny TGV fa notetezin-dry zareo daholo ny lohahevitra azo raisina dia manana valin-teny ara-teknika ka mazava ho azy raha mora voasarika ny rehetra satria ny valin-teny dia ara-teknika avokoa. Ny fanatanterahana kosa baraingo sy mety tsy hangarahara.
Famarotana tanindrazana maoderina ?
Mankasitraka sy mikatsaka ny fananganana ny Faritra ara-toekarena manokana na ny ZES ny IEM. Mety ho endriky ny fandrosoana io, saingy mety ho taratry ny famarotana ny tanindrazana amin’ny fomba maoderina, raha tsy mazava. Ny vahiny no hampiasa volabe eto amin’ny tanintsika, hanangan-javatra ary mila antoka izy fa tsy hamafy ny volabeny eo fotsiny. Ny tany dia hampiasaina ao anatin’ny 99 taona azo havaozina raha miditra amin’ny fampanofana na ny “baille Amphytéotique”. Voizina ny hoe: samy mahazo tombony mitovy na “gagnant-gagnant”, ka mila faritana mazava ny tombontsoam-pirenena sy ny vahoaka ao anatin’ireo ambara fa tetikasam-pampandrosoana mba tsy ho famarotan-tanindrazana.
Fitrandrahana ny harem-pirenena ?
Raha jerena amin’ilay fivoizana ny toe-tsaina samy mahazo tombony na “gagnant-gagnant”, dia hiditra amin’ny fifanarahana amin’ny vahiny ary hitrandraka ny harem-pirenena. Na ny fanatanterahana ny “Building”, “Tanamasoandro”,… dia mety tsy ho zakan’ny tetibolam-panjakana fa ny tanjona dia mila mitsangana eo, izany hoe mety hiainga amin’ny fiaraha-miasan’ny fanjakana amin’ny sehatra tsy miankina (3P). Mety hanana seha-pihariana araka harena ankibon`ny tany sy hazan-dranomasina na endriny hafa mihitsy isika kanefa hiditra ao anatin`ny kitapom-bolam-panjakana ve izany ? Maninona raha manosika ireo fitrandrahana solika efa misy mba hahafahan`ny Malagasy misitraka ny harem-pirenena, toa an`i Mada Oil ? Efa nisy rahateo ny fitrandrahana natao tamin`ny solika mavesatra
Tena hivaha ve ny olan’ireto sehatra ireto ?
Rano : Maninona isika no hamatsy rano any amin`ny firenena arabo kanefa ny Malagasy tsy misitraka rano fisotro madio (52%-n`ny mponina ihany)?
Fampindramam-bola : hotohanana ny tantsaha kanefa ny zanabola ambony be. Ny herim-pon`ny tantsaha dia ho lasa tombony ho an`ny mpampindram-bola. Tsy tokony hisy antoka avy amin`ny fanjakana ( garantie étatique) mba tsy hampiakatra ny zanabola.
Fahasalamana : Mifameno tanteraka ny tontolon’ny fahasalamana, dia ny resaka fotodrafitrasa, ny arak’olona, indrindra ny resaka vidin`ny fanafody, ka raha mbola ny politikan’ny hopitaly manara-penitra kisehoseho amin’ny fotodrafitrasa fotsiny no hatao, dia sarotsarotra ny hahita vokatra.
Fanabeazana : Noho ny krizy nifanesy teo amin`ny firenena, nihena ny fari-pahalalan`ny mpampianatra sy ny mpanabe, latsaka ambany koa ny fahaizan’ny mpianatra. Tsy misy politika mazava momba ny tontolon’ny fampianarana eto Madagasikara amin’ny sokajy rehetra anefa ao amin’ny IEM.
Kolikoly : ny sampandraharam-panjakana no tena ahitana kolikoly na ny mpiasa ambany hatrany ambony. Efa zatra nitsotra ny tanana tamin`ny kolikoly ary manana paikady hahafahana manala izany fomba ratsy izany ve ny mpitondra mba hanazarana indray ny mpiasa iray hamelona ny fianakaviana amin`ny alan`ny karamany madiodio ?
Fitsarana : Hanana fahaleovantena sa tsia ? Iaraha-mahalala ny zava-misy. Inona no drafitra sy paikady azo tanterahina ? Na ireo olona ao anaty fitondrana aza mantsy misy vitsivitsy, eny fa hatramin’ilay filoha manana dosie ara-pitsarana. Hiainga avy any ambony ve ny ohatra ?
Tsy fandriampahalemana : Faritra mena i Madagasikara ary tena zava-dehibe tokoa ny resaka fampitaovana ho an’ny mpitandro ny filaminana. Tsy vita kisehoseho ivelany anefa io fa misy fanadihadiana ara-piarahamonina tokony hatao, mila fijerena ny lafiny ara-tsosialy, toy ny resaka fananan’asa sy famokarana. Tena ratsy satria tsy misy asa, hany ka maro no lasa mangalatra sy manao asa ratsy rehefa tsy mahita hanin-kohanina. Efa ho isan’andro no handrenesana famonoan’olona, fakana an-keriny, jiolahy manafika fivarotana, dahalo mandrava tanàna... Mora no miantso mpamatsy vola na eto an-toerana na vahiny hampiasa vola eto amintsika amin`ireny tetikasa mafilotra ireny saingy raha mbola faritra mena ny firenena dia sarotra ny hanatanteraka izany.
Fizahantany : I Madagasikara dia firenena anisan`ny manana toerana tsara indrindra kanefa tena mbola kely raha mitaha amin’ny Nosy Maorisy ohatra, izay nisy mpizahatany 646 865 tamin’ny 2018 teo, raha 183 372 ny antsika. Mbola mila ezaka be. Mahasarika ireo teratany vahiny misotro ronono (vazaha lahy antitra) ary hanjakan`ny fizahantany mamoafady eto. Hoferana ve ny fidiran`ny vahiny toy ireny ? Ho aiza ny hoavin`ireo tanora Malagasy manoloana ireny vazaha antitra ireny ? Mba hahafahana mampiroborobo ny fizahantany, mila lalana manerana ny nosy mba hahafahan`ny Malagasy misitraka ireny toerana ireny. Vita ao anatin’ny 5 taona ve ?
Tsara rafitra an-taratasy ny IEM fa olana ny tsy fahafantaran`ireo izay nanoratra azy ny tena olana fototra eto Madagasikara. Be loatra koa ny fampanofinofisana ary tsy mazava tsara ny tetiandro hanatanterahana ny asa. Maro no manasokajy ny IEM ho programa tapi-maso natao mba hambaboana ny fon’ny mpifidy fotsiny aloha.